Haruki sy ny herin'ny zavakanto miova ao amin'ny Kirigami | Famoronana an-tserasera
Efa hitantsika matetika ny hery manova zavakanto haka zavatra isan'andro ary hanova azy ireo ho sary haingon-trano. Zavatra mitovy amin'ny zavakanto ananan'ity mpanakanto Japoney antsoina hoe Haruki ity afaka mamorona.
Haruki dia lasa fironana amin'ny asany kanto amin'izany fonosana maoderina ary izany dia miteraka tarehimarika fikitika kanto. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia raisiny ilay boaty boribory ovy malaza mba hahatonga azy ireo ho maodely 5 izay miakanjo miaraka amin'ny akanjo mahafinaritra sy manaitra.
Izay tena ataony dia ny maka ireo boaty boaty rehetra ireo izay ahitantsika ireo fahafinaretana ho an'ny mpanjifa rehetra, hanovana azy ireo ho lasa tarehimarika tena manaitra na amin'ny endrika ivelany na amin'ny fiafarany.
Tsy hieritreritra mihitsy isika hoe inona no azony omena raha misy ireo marika eken'ny rehetra rehefa Haruki tafiditra ao aminy ny zavakanto Japoney antsoina hoe "Kiries" na "Kirigami"; Ny kanto manapaka taratasy. Ary io mpanakanto io no nampifanaraka azy tamin'ny fomba tena manokana, fa manome azy fomba tsara sy famaranana mahafinaritra fotsiny.
La Miavaka ny fahaizan'i Haruki ary amin'ny tsirairay amin'ireo sanganasa ireo dia ahitantsika ny saina lehibe ao ambadiky ny tsirairay. Izy io dia habetsaky ny sakafo matsiro an'ny mpanjifa izay novainy mba hamoronana endri-tsoratra mihetsika na tranoben'ny nofinofy hahitana drawbridges sy ireo tilikambo avo ireo.
Mahavita raiso ny fonosana kafe misy marika fanta-daza hanangana motera etona iray manontolo miaraka amin'ny saretiny sy ireo lalamby izay tsy misy antsipiriany very ho an'ny asa kanto iray manontolo.
Haruki dia ao amin'ny twitter, noho izany raha te hanaraka ny kantony ianao ary ireo asa vaovao ireo dia tsy mandany fotoana ary manaraka azy amin'ny tambajotra sosialy misy hafatra kely. Avelanay ianao trozona lehibe io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity artista japoney ity dia manova ny boaty sy ny fonosana snacks ho zavakanto